BRIAN GAILLARDETZ: PLEX-GOER မှလင်းယုန်ခေါင်းဆောင်များအထိ - နှုန်းထားများ
Brian Gaillardetz: Plex-goer မှလင်းယုန်ခေါင်းဆောင်များအထိ
Walsh ရှိအငယ်တန်းသတင်းအချက်အလက်စနစ်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗိုလ်မှူး Brian နှင့် Gaillardetz ကိုသြဂုတ်လကရေခဲဖျက်လုပ်ငန်းတွင်သူကအားပေးခြင်းအားကစားသည်အားကစားဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်ရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။
သူ့တုန့်ပြန်ချက် - အမှတ်စဉ်အခြားအသင်းကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသည့်အခါ cheerleading အားကစားသည်မည်သို့ဖြစ်နိုင်သနည်း။ ဒါဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး
Tab BC သည်ဘရိုင်ယန်နှင့်အတူထိုင်ပြီးသူသည်အသင်း၏အားနည်းချက်များ၊ အသင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်နှင့်ဘော်စတွန်ကောလိပ်အားကစားသမားဖြစ်လာပြီးကတည်းကသူ၏ဘဝပြောင်းလဲလာပုံအကြောင်းလေ့လာရန်ထိုင်ခဲ့သည်။
Brian နှင့် Jack တို့သည်အဖွဲ့ကိုလှေကားထစ်များ၊ Erika Reilly၊
လုံးဝမဟုတ်ပါ။ ထိုမျှမကမှာအားလုံး။ အလေးအနက်ထား, မတနည်းနည်း။ ငါကြောင့်အားကစားထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး, တစ် ဦး တည်းအစဉ်အဆက်ငါကြောင့် ESPN အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ကြကုန်အံ့။
ငါ Plex မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ​​ငါအမှတ်တမဲ့အားပေးနေတဲ့အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုသတိမပြုမိစွာစောင့်ကြည့်နေပြီးနည်းပြကငါ့ကိုဖမ်းလိုက်တယ်။ ငါသည်ငါ့လေ့ကျင့်ခန်းသို့ပြန်သွားပေမယ့်နည်းပြ Alisa သူမကငါ့ကိုစကားပြောလိုကြောင်းပြောသူပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေနှစ်ခုကျော်စေလွှတ်ခဲ့သည် ။
ငါအလေ့အကျင့်မှကူးတဲ့အခါမှာအစဉ်အဆက်ရူ့စဉ်းစားခဲ့ဖူးသလောဟုငါမေးခဲ့တယ်။ ငါရယ်တယ် မနည်းနည်းတောင်မှမ ထိုညတွင်ကျွန်ုပ်သည်မည်သို့လွှင့်ပစ်ရမည်ကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပျော်စရာများစွာရှိခဲ့ပြီးနောက်အပတ်တွင်ပြန်လာပြီးအဖွဲ့သို့ဝင်ခွင့်ရစေသည်။
ဟုတ်တယ်လို့မင်းဘာကြောင့်ပြောတာလဲ ပူပြင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေလား မင်းတန့်တွေကိုလေ့လာချင်တာလား
ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပြသည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန် ပို၍ ကောင်းသောအရာကဘာလဲဆိုတာကိုတစ်ချိန်လုံးရယ်မောနေပြီး၊ အလေးမတင်ဘဲမိန်းကလေးများကိုဆွဲဆောင်သောလူမိုက်များဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့ဟုတ်တယ်, ငါမိန်းကလေးများက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်ပုံပါဘဲ။ ငါ၌လည်းအသင်းတွင်သူငယ်ချင်းအချို့ရှိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်အလွန်လွယ်ကူသွားစေသည်။
ငါသည်လည်းယှဉ်ပြိုင်မှုရှုထောင့်လွဲချော်နှင့်ရည်မှန်းချက်အတွက်အလုပ်လုပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အပေါ်ဖြစ်ခြင်း။ Cheering သည်ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ငါသည်ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဟမ်ကစားခဲ့ဖူးပြီးငါနပန်းလုံးခဲ့သည်၊ နောက်ကျောကိုပြန်ဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
ဘရိုင်ယန်နှင့်အငယ်တန်းလက်ကမ်းစာစောင်, Accursia Gallagher
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ် ဦး စလုံးသည်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး ယုံကြည်မှုရှိရမည်။ ဒါဟာအားလုံးအချိန်ကိုက်, technique ကိုနှင့်အစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူဓာတုဗေဒအကြောင်းပါပဲ။ Accursia Gallagher သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူပျံသန်းသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏ခုန်ချချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်တတ်လာသည်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်ဟာအခြားမိန်းကလေးငယ်များကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး၊ သူတို့အများစုဟာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုအပေါ်သို့ကျဆင်းသွားသည်။
သငျသညျအဖွဲ့အတွင်းဓာတုဗေဒဖော်ပြခဲ့တယ်။ cheer-sest တကယ့်အရာလား
Cheer-sest ကျိန်းသေအရာများ၏ဒိုင်းနမစ်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကထဲကနေဖို့ကြိုးစားပေမယ့်ငါကဖြစ်ပျက်သေချာပါတယ် (mhhmm ငါ့ကိုလိမ်မထားဘူး, Brian) ။ ငါတကယ်စိတ်ကူးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ငါနဲ့တခြားသူတစ်ယောက်နဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံတာကိုသူတို့စောင့်ကြည့်ဖို့လိုလို့ပဲ။ အဲဒီမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုမရှိပါ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးနီးကပ်စွာအတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြသည်။
ငါအသင်းနှင့်အတူခရီးသွားလာကိုချစ်။ ငါဘောလုံးကိုနှစ်သက်တယ်။ ပွဲတစ်ခုလုံးမှာအသင်းတစ်သင်းအဖြစ်သွားချင်တယ်။ ငါဒီရာသီ Clemson, Duke နှင့် Louisville ကမှရောက်ခဲ့, ငါတို့သည်နွေ ဦး အတွက်နိုင်ငံသားများများအတွက်လေ့ကျင့်နေကြသည်။ ငါအကြောင်းစိတ်ထားမိပါတယ်။
အမှန်တကယ်ရွှင်လန်းစေသည့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များထဲမှကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးအပိုင်းမှာလှည့်ဖျားခြင်းနှင့်လဲခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ထဲမ ၀ င်ခင်မှာငါလှည်းမောင်းလို့မရဘူး၊ နောက်ပြန် tuck ရပ်နေ ။ ငါသည်ငါ့ intramural ဘောလုံးအသင်းအတွက်ဂိုးသမားကစား, ငါတို့ဂိုးသွင်းတဲ့အခါမှာငါတစ်ခါတစ်ရံနောက်ခံထွက်နှင်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။
ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံသားများယှဉ်ပြိုင်မှု၏ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာကိုယ့်တကယ်မငါ့စတိုင်ပါပဲ။ တနည်းကား, ငါဟော်နှင့်နပန်းကောင်လေးပေါ့။ ပုခုံး။ ငါကခုန်မပြောဘဲ In- ရေတွက်တစ်ခုခုလုပ်ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့အချိန်ကိုက်အတိုင်းလိုက်နာဘယ်တော့မှပါတယ်။
မင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လိုနေလဲ သင့်ကြွက်သားတွေပိုကြီးလာသလား ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အတ္တပဲ ?
လေ့ကျင့်ခန်းအားစိုက်ထုတ်နေကြသည်။ ဒါဟာယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအကြားကွဲပြားပေမယ့်ငါ plex မှာငါ့ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်လှေကား၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ်နေ့သုံးနာရီ (ညနေ 7-10 ညနေ) လေ့ကျင့်ခန်းရှိသည်။ ငါပုံစံဖွံ့ဖြိုးဆဲအပေါ်လုပ်ဆောင်နေသည်နှင့်သောအရာတို့ကိုပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပါပဲ။
ငါအလေ့အကျင့်အတွက်အကြိမ် 50-60 ကြိမ်လေ့ကျင့်တာပါလျှင်, ငါတူသောပေါက်ကွဲမှုပမာဏအတူကျော -to- နောက်ကျော 115 ပေါင်တစ်ပခုံးစာနယ်ဇင်းလုပ်နေတာနဲ့တူရဲ့။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လက်နက်, သင်၏ခြေထောက်အတွက်ပေါက်ကွဲမှုရဲ့, သင်ထပ်ခါထပ်ခါမျှော်လင့်ပါတယ်အဲဒီမှာ 10 ၏သုံးစုံမဟုတ်ပါဘူး။
မဟုတ်ဘူး၊ မုန်းတယ် သူတို့ကသူတို့က PJs လိုပဲဟာသ။ အခြားအသင်းများတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ယူနီဖောင်းများရှိပြီးနွေ ဦး ရာသီတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသင်းသားများအတွက်အသစ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ပြနာမှာဘောင်းဘီများသည်ကြက်သွေးရောင်ဖြစ်ပြီးရှပ်အင်္ကျီများသည်တင်းတိမ်သော၊ အဖြူရောင်အောက်ရှိ Armor ရှပ်အင်္ကျီများဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အမြဲတမ်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသင်နားလည်ရမယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအမြဲစောင့်ကြည့်ပါတယ်။ အဲဒီမှာမကောင်းတဲ့ခေါ်ဆိုခရှိတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်အခြားလယ်ကွင်းရည်မှန်းချက်ကိုလက်လွတ်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ဤမျှလောက်အားဖြင့်တက်ခဲ့ကြသည့်အခါ Howard ဂိမ်းကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်တောင်မှမထားဘဲနေဖို့ရန်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါတယ် ငါဂိမ်းထဲမှာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရတယ်၊ ဒါကငါ့အတွက်ခက်ခဲတယ်။
ur မိန်းကလေး squirt လုပ်နည်း
ထုံးတမ်း ကျွန်ုပ်တို့သည် Clemson တွင်သာရှိခဲ့ပြီး Clemson သည်သူတို့၏ကျောင်းသားအပိုင်းကိုကစားပွဲမတိုင်မီမိနစ် ၃၀ တွင်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့က Pre- ဂိမ်းထုံးတမ်းတစည်းရှိသည်, လူတိုင်းကိုအတူတကွသောကွောငျ့တကယ့်လူတိုင်းစိတ်လှုပ်ရှားရရှိသွားတဲ့။
ငါန်းကျင် '' ရဲ့ shitfaced ရသွားကြကုန်အံ့နှင့်ငါတို့အသင်းဆုံးရှုံးစောင့်ကြည့်ကြကုန်အံ့။ '' ပတ်ပတ်လည်, ငါတို့အသင်းကိုထောက်ပံ့န်းကျင်ပိုပြီးယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့အလိုရှိ၏ကျနော်တို့အချိန်အားလုံးအနိုင်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါတို့အသင်းလုပ်နိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့သင့်ပါတယ်။
BC Football ကိုစကားလုံးတစ်လုံးဖြင့်ဖော်ပြပါ
ကျနော်တို့တင်းကျပ်စွာဂိမ်း, လယ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့်အတူအတက်အကျတွေအများကြီးမှတဆင့်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်, ငါတို့သည်လည်း Cam Moore နှင့် Darius ထွက်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့ဤမျှလောက်များစွာသောဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြစ်မှုသည်ရုန်းကန်နေရခြင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်နေ့စဉ်နှင့်ပြဇာတ်တိုင်းကိုကြိုးစားအားထုတ်နေပြီး၎င်းတို့သည်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအတွက်ရည်မှန်းထားသည်။ ကျွန်ုပ် Addazio ကိုယုံကြည်ပါတယ်
ဘရိုင်ယန်, အခြားရူ့အဖွဲ့ဝင်များနှင့် Pom ကစားသမား BC SportsCenter ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အားပေးပါတယ်
RA ဖြစ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်၏နည်းပညာအလုပ်သင်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျောင်းများကြားတွင် Cheer ကိုပေါင်းစပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအားပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ငါကပိုစနစ်တကျရှိတယ် ငါအချို့သောလှုပ်ရှားမှုများစွန့်ခွာခဲ့ကြပေမယ့်ငါကျောင်းဝင်းတွင်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းကိုခံစားရတယ်။ နှင့်ယောက်ျားတစ်ယောက် cheerleader အဖြစ်, ငါတို့က peppiest သူမြားမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒီအဖွဲ့သည်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းငါဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးအလုပ်လုပ်ပုံကိုခက်ခဲတကယ်ပြောင်းလဲသွားပြီ။
သင်အကြိုက်ဆုံးလှည့်ကွက် / လှည့်ကွက်ကဘာလဲ?
ငါပိရမစ်ကြိုက်တယ်။ ငါကြိုက်တယ် ဓာတ်လှေကား ။ ငါယောက်ျားဖြစ်ခြင်းကြိုက်တယ်။ ငါ့ကိုမနှစ်သက်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်လိုကြည့်စေသည်။
ကြောင်ကြောင်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားသည့်အခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းအပေါ်သို့မြှောက်ပြီးကျွန်ုပ်၌ရှိသောကြွက်သားနှင့်အောင်စတိုင်းကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်လိုသည်။ ငါလက်လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လှည်းနှင့်အတူရွှင်လန်းပြုပါရန်ရှိသည်သောအခါငါအနည်းဆုံးပုလ်ခံစားရတယ်။
ဟင့်အင်း၊ ဒါကငါလေ့လာသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးတ ဦး တည်းအရာဖြစ်တယ်, ငါလေ့လာသင်ယူလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။